[Thursday, August 31st, 17] :: Shanta qof ee ugu qanisan Soomaaliya
Nairobi (RH) Shan qof oo Soomaali ayaa lagu sheegay in ay yihiin dadka ugu maalqabeensan Soomaaliya sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay Wargeyska forbes oo ka faallooda hantida iyo hantiilayaasha dunidda.
Dadkaas waxaa ugu horreeya Cabdirashiid Ducaale oo ah maamulka shirkadda Dahabshiil.
Shirkadan oo ka shaqeysa xawilaadaha lacagta ayaa xarrunteeda weyn waxa ay ku taalla Dubai.
Dahabshiil waxa aasaasay Cabdirashiid aabbihiis waxaana la furay billowgii 1970-kii sida lagu sheegay warbixinta forbes.
Cabdirashiid Ducaale waa 40 sanno, waxa shirkadiisa ay lee dahay in ka badan 24,000 oo laamood oo ku yaalla 126 waddan oo caalamka ah.
Dahabshiil waxaa ka shaqeeya iminka in ka badan 2,000 oo shaqaale.
Sida lagu sheegay warbixinta forbes, dhaqaalaha soo galay Dahabshiil sannadkii 2016-kii waxa uu ka badnaa $1 billion.
Qofka labaad ee ugu taajirsan Soomaaliya
Wargeyska forbes ayaa sheegay in qofka labaad ee ugu taajisan Soomaaliya in uu yahay Cabdirisaaq Ido oo aasaasay isla markaana maamula shirkadda isgaarsiinta ee Nationlink oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xagga isgaarsiinta Soomaaliya.
Shirkadan oo xarrunteeda ay tahay magaalada Dubai ayaa la aasaasay sannadkii 1997. waxa ay bixisaa adeegga Taleefonada gacanta ee Mobile, Leemanak, Internetka iyo adeegga Mobailka ee Satellite-ka, waxaa ku xiran in ka badan 700,000 oo macaamiil.
Aamiina Xirsi Mooge
Haddaba, shanta qof ee ugu hantida badan Soomaaliya waxaa ku jirta Aamina Xirsi Mooge waana qofka dumarka ah ee ku jirta Liiska.
Aamina Xirsi waxa ay ku nooshahay oo ganacsi ku lee dahay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda.
“Waa Alle mahaddiis Annigoo dumar ah oo Soomaali ah haddii la igu soo qoray maqaalka Forbs in aan ka mid ahay dadka ugu qanisan Soomaaliya waxan oo dhan waxa ay muujinayaan haddii aad tahay aaamin oo aad Alle ku xiran tahay oo la timaado shaqo dheeri ah in aad guuleysanayso”ayey tiri Aamiina oo u warrantay BBC.
Sidee Aamina gacanta ku billowday?
Aamiina ayaa sheegtay in ay ku dhalay tuulo ku taalla Kenya isla markaana ganacsiga ay billowday iyadoo yer maadama aabbaheed uu dhintay iyadoo sagaal jir ah.
“Hooyadey ayaa i bartay ganacsiga annigoo inan yer halkaas ayaa ka billaabay oo markii horre Dukaan ayaa la ii furay oo dhismaha lagu iibiyo masaabiirta ayaa dadku ay aad u iibsanayeen kaas ayaan ka shaqeeyay oo dadkii baa aad iigu farxay”ayey tiri Aamiina Mooge.
Aamiina ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay 1998-dii in ay u soo wareegtay Uganda halkaasoo ay ka billowday ganaci oo mar dambe dowladda ay siisay dhul ay maalgaso sidaasna ay uga furtay goobo ganacsi oo waaweyn maadama aad loogu farxay.
Aamina miyey maalgalin ka sameeysay dhulka Soomaalida?
Aamiina mar la weydiiyey in maalgalin ka sameesay dhulka Soomaalida, waxa ay sheegtay in weli waddanka uu ku jiro marxalad colaad balse uu waayihii dambe soo roonaayey sidaas darteed aysan maalgalin weli ka sameen laakin ay mustaqbalka ku tala jirto.
Waxa ay sheegtay in mardhow ay furi doonto warshad sonkorta soo saarta.
“Illaa lix kun oo dumar ah ayaan ka shaqeeyaa oo aan shaqo abuur u sameeyay”ayey tiri Aamiina Mooge.
posted on Thursday, August 31st, 17